Ciidamo cusub oo la wareegay xarunta BF Somaliaiyo Farmaajo iyo Khayre ‘ | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidamo cusub oo la wareegay xarunta BF Somaliaiyo Farmaajo iyo Khayre ‘
Ciidamo cusub oo la wareegay xarunta BF Somaliaiyo Farmaajo iyo Khayre ‘
Arrintan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo Mooshin ka gudbiyay Guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka Soomaaliya C/kariin Xaaji Cabdi Buux oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay in galabta la qaaday Ciidankii oo dhan lana keenay Ciidamo cusub, iyada oo uu sheegay inaan lagu soo wargelin.
Wuxuu sheegay mararka qaar ee ay jiraan xaalado gaar ah in ay dalban jireen Ciidamo gaar ah oo lagu soo kordhin jiray Ciidamada Booliska ee ilaaliya ammaanka xarunta, balse arrintan iyaga aanan lagala tashan keliya ay marqura ka war heleen.
C/kariin Xaaji Cabdi Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay ilaa hadda in aysan jirin kulan ay yeelanayaan Golaha Shacabka, maadaama hadal heynta ay aheyd in Baarlamaanka berri oo Sabti ah ay shirayaan.
“Wallaahi runtii ilaa hadda ma jirto cid ka war qabta arintan, Ciidamada waala bedelay, xildhibaanada marka ay maqleen wal wal ayaa galay, kolley Madaxda Dowladda ayaa lagala hadli doonaa.” Ayuu yiri Xoghaye Buux.
Waxaa taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxeysa Guddoonka Golaha Shacabka oo garab ka mid ah ay gadaal ka riixeyso Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Khayre, arrintan waxaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelato kulamada Baarlamaanka.